यी युवतीको यो योगा पोजिसनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियो सहित) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०९, २०७८ समय: १८:३२:१६
भिडियो हेर्नु पूर्व योगाको महत्वबारे बुझौं । आजभोलीे धेरै मानि`सहरु मोटोपनाको कारण भद्दा भएको आफ्नो शरीरलाई फिट बनाउनको लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउँने गर्छन।
ती मध्ये स`बैभन्दा सरल र प्रभावकारी उपाय हो नियमित योगा र ध्यान गर्ने। नियमित योगा र ध्यान गर्नाले धेरै हाम्रो शरी`र चुस्त दुरुस्त त हुन्छ नै यसले शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतामा पनि सुधार गर्छ। योगा र ध्यानमा मानव शरीरका केही यस्ता राज लुकेका छन जसले हामी|लाई क्या|न्सर जस्ता कैयौं घात|क रोगहरु`बाट टाढा राख्न सक्छ।
सबैलाई योग, ध्यान गर्ने बिधि र तरिका थाहा नहुँदा अर्को स|मस्या पनि आउन सक्छ। योग गर्ने सही त`रिका र समयको बारेमा पनि जान`कारी लिइराख्नु पर्छ। खाली पेट बि$हान योग गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ।
आज हामी तपाईं|लाई नियमित ध्यान तथा योग गर्दा हुने फाइ|दाहरु बारे जानकारी दिनेछौं।
१. विश्वमा अहिले मानव शरीर|लाई बुझ्नको लागि नयाँ रिसर्चहरु भैरहन्छ । हालसालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार योगा र ध्यानले क्यान्सरको जोखिमलाई सजिलैसँग कम गर्न सकिने पत्ता लागेको छ।
२ं ध्यान तथा योगाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ साथै,सकारात्मक भावनाको विकास हुन्छ।३. योगा र ध्यानको एक फाइदा मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार पनि हो। ध्यान र योगाले स्मरणशक्ति तीक्ष्ण हुन्छ, तपाईं सहि किसिमले कुनै चीजमा केन्द्रित हुन पाउनुहुन्छ र एकाग्रता पनि बढ्छ। यसले गर्दा तपाईको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ
४. आजभोली मानिसहरु आफ्नो व्यस्थ जीवनशैली र कामका कारण चौबिसै घन्टा तनाबमा रहने गर्दछन। जसले गर्दा उनीहरुले कैयौं यस्ता रोगहरुको सामना गर्नुपरेको छ यदि सही ढंगले योगा र ध्यान गर्ने हो भने हाम्रो जीवनबाट तनाव भाग्छ। अर्थात यो एक यस्तो एन्टिडिप्रिसेन्ट हो जसले फाइदा नै फाइदा गर्छ ।
५.ध्यानले दिमागको एकाग्र हुने क्षमताको विकास गराई शारीरिक दुखाइबाट पनि छुटाकारा दिलाउछ।
६.एक अध्ययनबाट योगा र ध्यानको प्रयोगले हाम्रो खानपानको बानी पनि सुधार्ने तथ्य अगाडि आएको छ। नियमित योगा गर्ने बानीले हाम्रो रुची स्वस्थ खानाको तर्फ बढ्न लाग्छ। आहारको सुधारले मानिस खुसी हुन थाल्छ। जसले गर्दा आत्मविश्वास बढ्नुको साथै आफ्नो शरीरको ख्याल राख्ने इच्छा पनि बढ्छ।
७. ध्यान र योगाको प्रक्रियामा हामीले लामो गहिरो सास लिन्छौं र साथै शरीरको स्लो मुभमेन्ट पनि हुन्छ जसले गर्दा मनको चञ्चलता कम हुन्छ, जसले मनलाई शान्त स्वभावको बनाउँछ।
८.दैनिक थोरै समयसम्म योगा र ध्यान गर्नाले शरीरको लचकता मात्रै बढ्दैन बरु कार्यालयको काम गर्ने उत्साह र जाँगर पनि बढ्छ। अनिद्राको समस्या छ भने पनि सुधार हुन्छ।
९. योगा तथा ध्यान गर्नु मानव स्वास्थका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। बिहानको समयमा योग गरेर स्वस्थ रहन जो कोही चाहान्छ। यदि तपाइले नियमित योग तथा ध्यान गर्नु भयो भने यसले डर, चिन्ता तथा डिप्रेसनबाट मुक्त गराउँछ साथै कुलतबाट जोगिन सहयोग पुर्याउँछ।
१०. ध्यान तथा योग गर्नाले अरुप्रति मानवीय भावनाको विकास गराइ पारिवारिक सद्भाव बढउछ। नियमित ध्यान तथा योगको प्र्रयोगले रक्तचाप सन्तुलित भई मुटुरोगबाट बचाउँछ।
तपाईंको ध्यान तथा योगा गर्ने बानी छ भने दैनिकी सहज रुपमा बिताएको महशुस पक्कै गर्नुभएको होला। यदि ध्यान तथा योगा गर्ने बानी छैन भने आजैबाट सुरु गर्नुस। किनकि, ध्यान तथा योगा गर्ने बानीले तपाईंको स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन।
शीर्षकमा भनिएको युवतीको योगा भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नु होस् ।